Kidnapping, vonoan’olona teny Ambohitrarahaba : ankizy mianadahy vao 13 sy 15 taona ireo nahavanon-doza | NewsMada
Kidnapping, vonoan’olona teny Ambohitrarahaba : ankizy mianadahy vao 13 sy 15 taona ireo nahavanon-doza
Maty novonoina tamin’ny fomba feno habibiana i HesnyMattis, zazalahikely vao 12 taona. Nalana mihitsy mantsy ny voamasony anankiroa. Nalaina an-keriny koa avy eo ny anabavikeliny, Hiancy Natella. Afakomaly alina, nitrangan’ny loza ihany dia voasambotra ireo nahavanon-doza, izay ankizy mianadahy mbola tsy ampy taona (13 sy 15 taona) ihany koa.
Tsy mbola nisy tahaka ity! Ankizilahikely vao 13 taona sy ankizivavy 15 taona no nahavanon-doza namono zazalahy vao 12 taona monja, ary naka an-keriny zazavavy 6 taona, teny Andoavary Ambohitrarahaba, afakomaly. Nalan’ireo mihitsy ny voamason’ilay zaza, ankoatra ny habibiana natao taminy. Tratra afakomaly alina ihany, tokony ho tamin’ny 9 ora teo teny an-tranony, rehefa nandrasan’ny zandary, izy mianadahy ireo rehefa namonjy fodiana. Teo anatrehan’ny ray aman-dreniny ny nisamborana azy, ary mbola tany amin’izy dahy ny vola 13 tapitrisa Ar sy 24.000 dolara ary ny findain’ilay maty.
Efa hita ihany koa ilay tovovavy kely 6 taona antsoina hoe Hiancy. Hita teny Ambohitsimeloka Anosiala Ambohidratrimo io. Naheno feon-jaza nitomany ny olona manodidina niantso ny filoham-pokontany ary nampandre ny zandary eny Ambohidratrimo. Nahitana kitapo kely nisy voamaso tao anatiny tany aminy. Nilaza ity zazavavikely ity fa ny zanak’i Justine mpiara-milalao aminy no namono ny zokiny sy nitondra azy tany Ambohidratrimo.
Araka ny fanazavan’ny zandary, nampirisika ireo mianadahy ho nahavanon-doza hamono ilay tovolahikely ny mpiasa tao an-trano ary naka ny vola tao an-trano. “Nambaran’izy mianadahy fa ilay mpiasa no nampirisika ny hamono ary nilaza fa alana ny voamason’ilay vonoina fa hitan’ny zandary ao ny sarin’ireo namono. Izay ny antony nanalan’ireo ny voamasony”, hoy ny fitantarana.
Voalaza ihany koa fa izy mianadahy, variana namono; ilay mpiasa, nandeha nitsoaka. Nambaran’izy ireo fa mipetraka any Ambohidratrimo izy io ka naraiany tany ary nentiny nanaraka azy ilay zazavavikely. Tsy hita anefa ilay mpanampy ka navelany teny ilay zaza ary io hitan’ny fokonolona io. Izy dahy, namonjy fodiana ka noraisim-potsiny teo imason’ny ray aman-dreniny. Araka ny fanazavan’ny zandary ihany, karohina ilay mpanampy io amin’izao fotoana izao. Mandeha ny fanadihadiana lalina momba ity raharaha ity, ary mbola tsy fantatra ny fotoana hanolorana izany ny fitsarana.
Miteraka resabe eto an-drenivohitra ary nanerana ny tambajotra sosialy ity tranga teny Ambohitrarahaba ity. Toe-javatra tsy fahita firy rahateo, satria ireto nahavanbon-doza, samy ankizy tsy ampy. Matetika, jiolahy rain-dahiny, efa mpamerin-keloka no mahavita heloka bevava, fakana an-keriny sy vonoan’olona feno habibiana tahaka izao. Eo indrindra no hipetrahan’ny adihevitra ny amin’ny tokony hanamafisana ny fitaizana sy fanabeazana ny ankizy. Manana andraikitra lehibe voalohany, ary tsy afa-miala amin’izany ny ray aman-dreny sy mpanabe. Voakasik’izany koa anefa ny fiarahamonina, eny hatramin’ny fitondram-panjakana mihitsy aza. Iaraha-mahalala ny fitobaky ny teknolojia moderna, finday, ny internet, ny tambajotram-pifandraisana sosialy (facebook)… Tsy voafehy intsony ny fampiasana azy ireny ankehitriny, satria hatramin’ny ankizy madinika, tsy ampy taona aza izao dia efa tsy laitra amin’ny fikirakirana ireny fitaovana ireny. Mila fehezina izany, ary samy tompon’andraikitra avokoa ny rehetra, voalaza etsy ambony. Fanontaniana mipetraka àry izao, inona no sazy hampiharina amin’ireto ankizy tsy ampy taona nahavanon-doza ireto ? Ny fitsarana no tompon’ny teny farany amin’izany.
Une réponse à "Kidnapping, vonoan’olona teny Ambohitrarahaba : ankizy mianadahy vao 13 sy 15 taona ireo nahavanon-doza"
Maude 12/10/2017 à 14:32
Tena mampalaelo be !! Dia tena nahavita ilay ankizy ka ! Raha ny hevitro manokana dia alao ilay ankizy 13 taona sy 15 taona higadra mandrapahafatiny ! Any @maison correctionnelle des mineurs aloha mandrampaha tonga taona azy! Dia any antsiahafy no mandany ny fiainany ! Izay no mendrika azy ! Raha tsymigadra ireny sûre ah fa tsy maintsy hanao vengeance ny ray aman-dreny very zanaka… « Aina solon’ny aina » na izaho koa ary ny t@toeran’izy ireo mety hanao izany kanefa tsy mety izany indrindra @maha kristianina anao… Alao izy hanala ny andro hiainany any am-ponja…Any izy misaintsaina tsara ny ratsy nataony… Atao mahatsapa fijaliana, fahaizina satria nanao zavatra goavana be tsy mety : namon’olona tsy manan-tsiny !